ရာသီစာ မြူရွက်သုပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ရာသီစာ မြူရွက်သုပ်
Posted by Ma Ma on Jan 21, 2012 in Food, Drink & Recipes | 25 comments
တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာမှ အခုလို နှင်းကျတဲ့အချိန်လေးမှာပဲ ရတတ်တဲ့ မြူရွက်ကလေးတွေ သုပ်စားကြရအောင်။
မြူရွက်ရဲ့ ပင်ကိုယ်က ဆိမ့်တဲ့အရသာရှိပါတယ်။
ဈေးပေါပြီး သုပ်စားရတာလည်း အလွန်လွယ်ကူတဲ့အပြင် တော်တန်ရုံအရွက်မကြိုက်သူတွေတောင် ကြိုက်ကြပါတယ်။
အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ ရနိုင်တဲ့ ရာသီစာမို့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ ကော်နက်ရှင်ကို အံတုပြီး အချိန်မှီ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မြူရွက်ကို အရိုးရင့်တွေဖယ်ပြီး ကန်စွန်းရွက် သင်သလို သင်ရပါတယ်။
ပြီးရင် ရေနွေးဆူဆူထည့်ပြီး ဖြောထားပါ၊ ခဏကြာသည်ထိ အဖုံးအုပ်ပြီးထားပါ။ (သို့) ပြုတ်လိုက်ပါ။
မျှင်ငပိကို မီးကင် (သို့) ပေါင်းထားပါ။
ဒါမှမဟုတ် ဆီနည်းနည်းမှာ မျှင်ငပိကို ထည့်ကြော်ပါ။
အခုကတော့ အလုပ်ထဲမှာ သုပ်စားတာမို့ အသင့်စား မျှင်ငပိဘူးလေးကိုပဲ သုံးလိုက်ပါတယ်။
မြူရွက်ပြုတ်၊ မြေပဲထောင်း၊ မျှင်ငပိကင်၊ ရှောက်သီး၊ ပိုကောင်းချင်လို့ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်ထည့်ထားတယ်။
မြူရွက်ပြုတ်ကို မြေပဲထောင်း၊ မျှင်ငပိကြော် ထည့်ပြီး အပေါ်က ရှောက်သီး (သို့) သံပုရာသီးလေး ညှစ်ပြီး သုပ်လိုက်ရင် စားကောင်းတဲ့ မြူရွက်သုပ်ကို ရပြီပေ့ါ။
မြူရွက် ၁စီး= ၁၀၀ ကျပ်
မြေပဲလှော် ၁ထုပ်= ၅၀ကျပ်
မျှင်ငပိ ၁ဘူး= ၅၀ကျပ်
မြူရွက်သုပ်ဆိုတာကို အညာမှာ စားဘူးတယ်လို့ပဲ အမှတ်ထားတာ။
(သတိတွေ မေ့လျော့လာတယ်ဆိုတော့ တံခါးခေါက်သံ စိပ်လာတဲ့သဘောပဲ… )
ကျွန်တော်လည်း အညာစာလို့ ထင်မိကြောင်းပါ …
မမ ရေ မြူရွက်သုပ်ကို ဦးဦးဖျားဖျား နှိုက်မြည်းမလို့ ကြံနေတုံး
စားလို့ကောင်းပါ၏ (အတွေးထဲမှာ စားသုံးသွားပါသည်) …
မမရေ ကျနော်တို့အိမ်သုတ်စာရင်းငပိမထည့်ဘဲ ငံပြာရည်ထည့်တာဗျ။
ကျနော်က ချက်တတ်ဘူးနော် မြင်ဘူးတာပြောတာ။
ဦးပါလေရာ၊ မောင်ကင်း၊ ကိုပေါက်-
မနှစ်က အညာသွားတုန်းက သုပ်ကျွေးလိုက်တာကို စားကောင်းလွန်းလို့ သုပ်နည်းပါမေးလာတာ။ တစ်နှစ်တိတိစောင့်ပြီး ဒီနှစ်ကျမှ ဈေးထဲမှာတွေ့လို့ သုပ်စားရင်းနဲ့ ရွာသူားတွေကို သတိရလို့ တင်ပေးလိုက်တာ။ ဒီမှာ မြူရွက်ကို သိတဲ့လူနည်းတယ်။ မစားတတ်ကြဘူး။
ကိုပေါက်ရေ-ငံပြာရည်ထက် မျှင်ငပိကို ထည့်သုပ်ပြီး စားကြည့်ပါလား။
ဆူးပန်းရွက် နဲ့ တူနေလို့ မြူရွက်တော့ တခါမှ မမြင်ဘူးဘူး။ ဆူးပန်းရွက်လို့ ခေါ်တဲ့ အရွက်ကတော့ ကြမ်းတယ် အိမ်မှာ ချဉ်ရေဟင်းချက်စားရတာ အမေ က ကြိုက်လို့ တွေ့ရင် ၀ယ်ပြီး ချက်တယ် သိပ်တော့ မရပါဘူး တခါတလေမှ ရတယ်။
မြူရွက်ကို ကြားဖူးတယ် မမြင်ဖူးဘူး။ စားလည်းမစားဘူးဖူး။ နောက်တွေ့မှ သုပ်စားဦးမယ်။ ဆူးရေ အ၀ါရောင်အပွင့် ပွင့်တဲ့ ဆူးပန်းပင် အမြစ်ကို သွေးသောက်ရင် သွေးတိုးကျတယ်။ မမှီတို့ဘက်မှာ အရမ်းပေါတယ် အဲ့သည့် ဆူးပန်းပင်တွေလေ။
ဆူးပန်းရွက် ကို ဈေးမှာ ၀ယ်တာ တခါမှတော့ အပွင့် မမြင်ဖူးပါဘူး။ အပင်ကလေးက မုန်လာပင်ပေါက်လို သေးသေးလေးတွေ နှုတ်ပြီး လာရောင်းသလိုမျိုးတွေ့မိတာပဲ။
အထူးအဆန်း ပါတကား မာမားရဲ့
အရသာကော ဘယ်အရွက်နဲ့ ဆင်လဲခင်ည..
ရွာသူားများအတွက် ၂၀၀ကျပ်ထဲနဲ့စားလို့ ကောင်း ခံတွင်းမြိန် ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လဲ ညီညွတ်တဲ့ အသုပ်တစ်ပွဲ ကို မမ က တင်ဆက်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ….
ပုံစံက ဟင်းနုနွယ်ရွက်နဲ့ ဆင်တယ်။ ဒီကလူတွေ သိပ်မသိကြဘူး။
အလုပ်မှာ အညာက ကလေးမလေးက တွေ့လို့ ၀ယ်လာပေးတာနဲ့ သုပ်စားဖြစ်လို့ ရိုက်ထားလိုက်တာ။
မြူရွက်ရဲ့ အရသာက ဆိမ့်ပြီး နူးညံ့တယ်။
သုပ်ရလွယ်ပြီး စားလို့လည်း ကောင်း၊ အကုန်အကျလည်းသက်သာတယ်။
ဒါပေမယ့် နှင်းကျတဲ့အချိန် ခဏလေးပဲရတတ်တယ်။
စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်ရင် နူးဘာဂိုဏ်းသားများကို advertising manager ခန့်ရမယ်။
မဒမ်ပေကို မြန်ကောင်းသက်သာ ဟင်းနည်းလေးပေးပြီး ဈေးဖိုးလျှော့ပေးလို့ရတယ်နော်။
အခု ဖွင့်လိုက်မှ စောစောက အပင်မတွေ့ပါဘူး ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် မတွေ့တာလားလို့ ကိုယ့်ဟာကို ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်တုန်း.. အခုမှ တင်ပေးတာ ရေးတာ မြင်မှပဲ ဆူး အမြင် အမှားဘူး ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကို သိတော့တယ်။
စူးပန်းရွက် ဆိုတာကတော့ အဲလို အပင်မျိုးမဟုတ်ဘူး အပင်နဲ့ မြင်တော့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သေချာ သွားတယ်။
နောက်တခါ ထူးထူးဆန်းဆန်း ရှိရင် သံချောင်းခေါက်လိုက်ပါ.. ၀ါသနာပါလို့.. ဟိဟိ..
ဆူး နဲ့ အန်တီတို့နဲ့ ဇော်ဂျီ ဒုတ် တထောက်စာပဲ ဝေးတာဆိုတော့ တခုန်ဆို အိမ်ရှေ့အရောက် လာစားလို့ ရတယ်။
ဇော်ဂျီဒုတ်တထောက်စာ ဆိုတဲ့စကားလုံး ခုမှကြားဖူးတယ်။
သက်ငယ်စကား သက်ကြီးကြားပေ့ါ၊ ဗဟုသုတ တိုးသွားပါတယ်။
နောက်တခါဆို သံချောင်းခေါက်လိုက်ပါမယ်။ နားစွင့်ထားပေ့ါနော်။
အခုမှ ထွင်လိုက်တာါ အန်တီ.. အန်တီ ကြိုက်ရင် မူပိုင်ပေးလိုက်မယ်။
အသုပ်ရဲ့ အသက်က အဆာပလာပါဘဲထင်ပါရဲ့။
မမရဲ့ မြူရွက်သုပ်ကလဲ ထမင်းမြိန်စရာလေးဘဲဗျာ။
အရွက်သုပ်တွေနဲ့ ထမင်းစားရတာ သဘောကျတယ်။
ဒီမှာအနေ ကြာလာတော့ ဆီကြော်တွေ စားရမှာကြောက်လာပြီ။
အသုပ် သုပ်တာတော့ တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျ။
ဝက်သားတွေပြုတ်သုပ်၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်၊ ထမင်းသုပ်တွေလုပ်စားဖြစ်တယ်။တယောက်တည်းနဲ့။
အားလူးပြုတ်၊ပဲပင်ပေါက်ရေနွေးဖျော၊သခွါးသီး၊ဂေါ်ဖီပါးပါးလှီးထဲ့၊ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်နဲ့ ပဲ မှုန့်ဖြူး၊ငံပြာရည်၊
မန်ကျည်းရည်၊ဆီချက်လေးနဲ့ ပဲကြော်ချေထဲ့၊ နံနံပင် ညှပ်ထဲ့၊ငရုတ်သီးမှုန့်လေးလဲမကျန်ထဲ့ထားနောက်ပြီး
ကြက်ဥပြုတ်လေးပါးပါးလေးလှီးထဲ့ထားတဲ့ ကိုယ်တိုင်သုပ်ခေါက်ဆွဲသုပ်ဆိုတခါစားရင် တဇလုံလောက်မှ ဝတယ်။
အသုပ်မှာ အဆာပလာက အဓိကပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီမြူရွက်သုပ်ကတော့ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ဆီချက်၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်တွေ ထည့်စရာမလိုပဲ မျှင်ငပိ၊ မြေပဲလှော်၊ ရှောက်သီးရှိရုံနဲ့တင် သုပ်စားလို့ရလို့ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။
မမရဲ့ မြူရွက်သုပ်က (လက်တွေ့လျှာတွေ့ အားပေးလိုက်ရသောကြောင့် ) အဟုတ်အမှန် အရသာရှိပါကြောင်း
အမှန်အကန် စားသုံးသူမှ ထောက်ခံအပ်ပါသည်။
စာနဲ့ရေးပြသွားသော ဆရာသစ်၏ ကိုယ်တိုင်သုပ်ခေါက်ဆွဲသုပ်ကိုလည်း ထောက်ခံချက်လိုချင်လျှင်မြည်းပေးနိုင်ပါကြောင်း
မား-မာ-မိုးမွန်မတ်ပေါက် အသင်း ကိုယ်စား၊
အရသာ ဆိမ့် တယ်ဟု ပြင်ပါရန်၊
ဒါကတော့ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါနော်။ :red face:
တီချာသိတဲ့ မြူရွက်က ဒီလို အရွက်မကြီးဘူးထင်တယ်။
ပြီးမှနှုံ့ နေအောင် ကတ်ကြေးကိုက်ပစ်လိုက်တာ။ အဝေရာရွက်သုတ်ရင်လည်း
Anyway, မမရဲ့  မြူရွက်သုတ်လေးကြည့်ပြီးဗိုက်ဆာလာပြီ။ မနက်ကျရင်
အတုခိုးသွားပါ၏၊အစဉ်ပြေလျှင် မီနှုးထဲထည့်လိုက်မယ်၊ဒါပေမယ့် ဒီမှာတော့ အဲဒီမြူရွက်တော့ရနိုင်မယ်မထင်ဘူး..တစ်ခြားအလားတူတဲ့ အရွက်တစ်မျိုးသုံးပြီးစမ်းသပ်ဦးမှပဲ…ကျေးဇူးပါမမရေ…အသုတ်ဆိုတော့အသုံးဝင်သဗျ…
မမရေ – အဲဒီမြူရွက် က ဟိုးအရင် တို့တွေ အဖွား နေတဲ့ ပြည်မြို့အလွန် မြို့လေးမှာ ပေါမှပေါ။
မြူရွက်သုတ်၊ ညောင်ဖူးသုတ်၊ ငှက်ပျောဖူးသုတ်၊ ချင်ပေါင်ဖူးသုတ်၊ မျှစ်သုတ်၊ ဘူးသီးခြောက်သုတ် အစုံပါဘဲ။
အဲလို အသုတ်မျိုး တွေနဲ့ဆိုထမင်း ကို အသားဟင်း မလိုဘူး။ အပြတ်တီးတာဘဲ။
ရန်ကုန် က လူတွေက သိပ်မသိကြဘူး။
အခုတော့ ပဲမှုန့်က တော်ရုံဝယ်မရတော့ အဲလို အသုတ်တွေ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။
မမ အသုတ်လေးက စားချင်စရာ။ ရှလွတ် ……
မြူရွက်သုတ်ကို သူများသုပ်ကျွေးတာ တစ်ခါပဲ စားဖူးတယ်
ကိုယ်တိုင်တော့ မသုပ်စားဖူးသေးဘူး အန်တီမမ ပြောပြထားတော့လဲ
လွယ်သားပဲနော် သုပ်စားကြည့်ဦးမယ် ကျေးဇူးပါ အန်တီမမရေ ……………
i was born in Magway & long time to eat this salad. I miss the this salad. When i was young aged, mum made it this salad in every week (at least one time per week) & our family lunch is very delicious with this salad.
Thank you so much, Ma Ma.
Now I know how to make it & to having lunch in some Sunday with this salad.
အညာသွားလည်တုန်းက စားဘူးတယ်။ အရမ်းစားလို့ကောင်းတာဘဲ။ နည်းဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။